Diyaaraddii sidday xiddigaha xulka qaranka Jarmalka oo iyadoo hawada ku jirta Cilladi ku timid & Halka ay haatan wax marayaan – Gool FM
Diyaaraddii sidday xiddigaha xulka qaranka Jarmalka oo iyadoo hawada ku jirta Cilladi ku timid & Halka ay haatan wax marayaan
Haaruun September 9, 2021
(Munich) 09 Sebt 2021. Waxaa la soo warinayaa in diyaaraddii sidday xiddigaha xulka qaranka Jarmalka ay cilladi ku timid iyadoo hawada ku jirta.
Xiddigaha xulka qaranka Jarmalka, Macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee xulka ayaa qaatay habeen argagax leh iyo saacado cabsi ah oo ay naftooda ka quusteen kaddib markii loo sheegay in diyaaraddii sidday oo hawada ku jirta ay cilladi ku timid.
Waxa ay diyaaraddaan oo nuuceedu ahaa Boeing 737 ay xulka qaranka Jarmalka ka soo qaadday Iceland, halkaasoo ay xalay kula soo ciyaareen xulka dalkaasi, waxaana ay cillad ku timid iyadoo dul maraysay dalka Scotland.
Xaalad deg deg ah ayaana diyaaraddaas loogu dajiyey Magaalada Edinburgh, iyadoo si bad qab leh ku degtay, iyadoo aan wax khasaare nafeed iyo maaliyadeedba aysan ka dhalanin.
Xiriirka kubadda cagta Jarmalka ayaa shaaciyey warkaan naxdinta leh, waxaana ay sheegeen in dhammaan xiddigaha, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee xulku ay badbaadeen oo ay diyaaraddu si nabdoon ku degtay.
Arroornimadii hore ee saaka ayay hayad markii diyaaradda oo ku jirta duulimaadka hawada sare oo 29,0000 fiit ah uu Duuliyuhu dareemay cillad qabsatay, taasoo sababtay inuu safarka sii wadi kari waayo, waxaana uu ku leexiyey Edinburgh oo uu ku dejiyey markii ay saacaddu ahayd 7:00 Subaxnimo saacadda geeska Afrika oo ku beegnayd 4:00pm waqtiga UK, waxaana uu duuliyuhu ku guuleystay inuu si nabad ah ku dajiyo diyaaradda.
Bayaan ka soo baxay xiriirka kuabdda cagta Jarmalka ayaa lagu xaqiijiyey in xiddigaha xulku ay bad-qabaan ayna ku sugan yihiin Scotland, isla markaana diyaarad kale ay ka soo qaadi doono dalkaasi.
Xulka qaranka Jarmalka ayaa xalay waxa ay 4-0 ku soo garaaceen Iceland, waxaana ay ka soo duuleen Magaalada Reykjavik, iyagoo kusii jeeday Magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Jadon Sancho: "Waxay noqon doontaa Waalli ah, marka aan saddexdeennu isku helo garoonka gudihiisa"
Kooxda Bayern Munich oo qorsheynaysa inay xagaaga soo socda soo qaadato xiddig ka tirsan Chelsea